ပြည်တွင်းပြည်ပ အထူးသတင်းများ - Page3of 95 - Trusted News
တိုင်းပြည်နွံနစ်နေချိန်မှ ထားရှိတဲ့ ခံယူချက်နှင့် သဘောထားအမှန်ကို ဖခင်ထံမှာရင်ဖွင့်ပြီးပြောပြလာခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာဆာဆာ
တိုင်းပြည်နွံနစ်နေချိန်မှ ထားရှိတဲ့ ခံယူချက်နှင့် သဘောထားအမှန်ကို ဖခင်ထံမှာရင်ဖွင့်ပြီးပြောပြလာခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာဆာဆာ တိုင်းပြည်နွံနစ်နေချိန်မှာ ကူညီဆွဲတင်နေတဲ့သူတွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာဆာဆာဟာ မြန်မာပြည်ဖွား ချင်းလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်မှုကိုခံစားခဲ့ရတဲ့တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အခုလို တစ်တိုင်းပြည်လုံး ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေချိန်မှာ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က အကောင်းဆုံးလုပ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက်ကူညီပေးနေခဲ့သူပါ။ …
23/06/2021 By fella News
အကြမ်းဖက် အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်မှာ မြန်မာစစ်တပ်ကို ထောက်ခံနေပြီး လမ်းမှားကိုဦးတည်နေတဲ့ တရုတ်မူဝါဒအမှား
အကြမ်းဖက် အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်မှာ မြန်မာစစ်တပ်ကို ထောက်ခံနေပြီး လမ်းမှားကိုဦးတည်နေတဲ့ တရုတ်မူဝါဒအမှား မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီး ၅ လခန့်ကျော်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာ့ အရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ သဘောထားဟာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အပေါ် သိသိ သာသာ အလေးပိုလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တရုတ်ဟာ …
22/06/2021 By fella News
ယနေ့နံနက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပစ်ခတ်မူများကြောင့် မန္တလေးစာသင်ကျောင်းက ကလေးတွေအိမ်ပြန်မလွှတ်လို့ မိဘတွေစိတ်ပူ
ယနေ့နံနက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပစ်ခတ်မူများကြောင့် မန္တလေးစာသင်ကျောင်းက ကလေးတွေအိမ်ပြန်မလွှတ်လို့ မိဘတွေစိတ်ပူ မန္တလေးမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကြား နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ မန္တလေးမြို့နေရာတော်များများမှာ လက်လုပ်မိုင်းတွေဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသွားတတ်နေကြတဲ့ ကလေးတွေပြန်ခေါ်ချင်ပေမယ့် ကျောင်းတံခါးပိတ်ထားပြီး ပြန်ခေါ်မရလို့မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေ စိတ်ပူနေကြရတယ်လို့ မန္တလေးမြို့ခံပြည်သူတွေဆီကသိရပါတယ်။ “မနက်(၈)နာရီလောက်ကတည်းက ပစ်ခတ်နေပြီး …
မကြာမှီအချိန်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ မြို့တွင်း/မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများအတွက် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ချက်များ ( မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီး အတွေ့အကြုံရရှိခဲ့သူ တဦးပြန်လည်ပြောပြချက်ကို ဖော်ပြပါသည်။ )
မကြာမှီအချိန်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ မြို့တွင်း/မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများအတွက် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ချက်များ ( မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီး အတွေ့အကြုံရရှိခဲ့သူ တဦးပြန်လည်ပြောပြချက်ကို ဖော်ပြပါသည်။ ) မြို့တွင်းတိုက်ပွဲဟာ တောတွင်းတိုက်ပွဲနဲ့ ကွာခြားချက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ မြို့တွင်းတိုက်‌ပွဲမှာ အရေးအကြီးဆုံးအချက်က တိုက်ပွဲထဲမပါဝင်သော …
Soft power ဆိုတဲ့ သံခင်းတမန်ခင်း ကိုအသုံးပြုတဲ့ ကမ္ဘာကုလ သမဂ္ဂ ဆုံးဖြတ်ချက် ဘာလုပ်လို.ရမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်များအတွက် အဖြေ…..
Soft power ဆိုတဲ့ သံခင်းတမန်ခင်း ကိုအသုံးပြုတဲ့ ကမ္ဘာကုလ သမဂ္ဂ ဆုံးဖြတ်ချက် ဘာလုပ်လို.ရမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်များအတွက် အဖြေ….. လာမေးတဲ့သူ များလို. သိသလောက် ပြောရသလောက်လေး ပြောပေးပါ့မယ်။ ကုလ အဖွဲ.ဆိုတာ တကယ်တော့ …
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီအတွက် မိမိကိုယ်တိုင် ကျည်ဆံအလှူရှင်တွေ ဖြစ်နေပြီလား? ဖတ်ပြီး ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေးပါ
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီအတွက် မိမိကိုယ်တိုင် ကျည်ဆံအလှူရှင်တွေ ဖြစ်နေပြီလား? ဖတ်ပြီး ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေးပါ မြန်မာဘောလုံးပရိတ်သတ်များအကြား ဒိုလေး ဟုခေါ်ဆိုကြသော ခရစ်တီယာနို ရော်နယ်ဒိုဟုဆိုလိုက်လျှင် မသိသူမရှိအောင် ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာဖြစ်သည့် အင်စတာဂမ်တွင် စောင့်ကြည့်သူ (Follower) သန်း …
ယနေ့နံနက်ပိုင်း မန္တလေးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွင် စစ်အုပ်စုဘက်က ၂ ဦးကျဆုံး၊ PDF ဘက်က ၆ ဦးဖမ်းဆီးခံရဟု PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပြော
ယနေ့နံနက်ပိုင်း မန္တလေးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွင် စစ်အုပ်စုဘက်က ၂ ဦးကျဆုံး၊ PDF ဘက်က ၆ ဦးဖမ်းဆီးခံရဟု PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပြော မန္တလေးမြို့မှာ ဒီနေ့ ဇွန်လ ၂၂ ရက် မနက်ပိုင်းက အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုတပ်တွေနဲ့ မန္တလေး PDF …
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ မြန်မာ့အရေး ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မထောက်ခံခဲ့ခြင်းက အရေးပါသည့် အကြောင်းအရာများ မပါဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ဟု ထိုင်းဘက်က ရှင်းလင်း
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ မြန်မာ့အရေး ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မထောက်ခံခဲ့ခြင်းက အရေးပါသည့် အကြောင်းအရာများ မပါဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ဟု ထိုင်းဘက်က ရှင်းလင်း မြန်မာ့အရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အဆိုပြုဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဇွန် ၁၈ ရက်က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် မဲခွဲခဲ့ကြစဉ်က ထိုင်းနိုင်ငံကကြားနေခဲ့ခြင်းသည် အဆိုပြုချက်ထဲတွင် အရေးပါသည့်အကြောင်းအရာ အချို့ …
21/06/2021 By fella News
စစ်သည် ဇနီးတို့ရဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး မှာ ပါဝင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတချို့
စစ်သည် ဇနီးတို့ရဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး မှာ ပါဝင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတချို့ ယောက်ျားစစ်သားတွေက အသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီး စစ်သားလုပ်ရတယ်။ ဇနီးသည်တွေက ဆင်းရဲဒဏ်နဲ့ ပင်ပန်းဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး နောက်တန်းဖရိုမရဲမဖြစ်ရအောင် တာဝန်ထိန်းသိမ်းပေးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရာရှိကြီး တွေကတော့ စစ်လဲမ တိုက်ရပါဘဲ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး …
တပျပေါငျးစုနိုငျငံရေး အသကျဝငျလာပွီလား…… ???
တပျပေါငျးစုနိုငျငံရေး အသကျဝငျလာပွီလား…… ??? မွနျမာ့လှတျလပျရေးကွိုးပမျးမှုမှာ၊ ဦးဆောငျခဲ့တဲ့ နိုငျငံရေးအငျအားစုဟာ ဖဆပလ ဖွဈပါတယျ။ ဖဆပလကို ကှနျမွူနဈပါတီ၊ ပွညျသူ့အရေးတျောပုံပါတီနဲ့ ဗမာ့မြိုးခဈြတပျမတျော…. စတဲ့ အစုအဖှဲ့နဲ့ ပေါငျးစုဖှဲ့စညျးခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ နိုငျငံရေးသုတသေီတခြို့က၊ ဖဆပလဟာ တပျပေါငျးစု …